[Akụkọ Ọrụ] Ejikọtara Chenzhou Jiucaiping Energy Storage Power Station na grid maka ọrụ nnwale-News-HNAC Technology Co., Ltd.
[Akụkọ Ọrụ] Ejikọtara Chenzhou Jiucaiping Energy Storage Power Station na grid maka ịrụ ọrụ nnwale.
Oge: 2021-06-21 Hits: 44
Na June 18, nke abụọ agba agba batrị nchekwa ngosi oru ngo saịtị nke Hunan Power Grid-Chenzhou Jiucaiping Energy Nchekwa Power ọdụ, nke HNAC wuru, jikọrọ nke ọma na okporo maka nnwale ọrụ.
Ọrụ Chenzhou Jiucaiping Energy Storage Power Station na-eji oghere dị na ọdụ ụgbọ mmiri dị ugbu a dị ka ebe a na-ewu ihe. Ọnụ ọgụgụ ihe owuwu a bụ 22.5MW / 45MWh n'akụkụ 10kV AC. Ọ na-anakwere teknụzụ nchekwa ike elektrọnịkị yana okirikiri nhọrọ ukwuu nke “ụlọ arụrụ arụrụ arụ”. Teknụzụ Huazi nyere ọrụ a ngwaahịa na ọrụ metụtara.
The ẹkụre nke oru ngo emewo nke ukwuu mma larịị nke ọhụrụ ume oriri na n'ógbè, na mma ike ọkọnọ ike nke Hunan Power Grid n'oge ọnụ ọgụgụ kasị elu awa awa, nke nwere ike moderately belata ike okporo akụrụngwa ego na-enwe ike na-akwado na-adịru nwa oge. nchekwa na nkwụsi ike nke grid ike.
A malitere ọrụ ngosi ngosi nchekwa ike batrị nke abụọ nke Hunan Power Grid na Ọktọba 2020, yana ngụkọta nke 60MW/120MWh. Ọ ga-eji saịtị anọ (7.5MW, 10MW, 20MW, 22.5MW) ohere ịnweta, ọkwa voltaji nnweta bụ 10kV. E tinyela ọdụ ọkụ nchekwa ike anọ nke ọrụ a n'otu n'otu, ma ga-arụ ọrụ ọkụ ọkụ yana ọdụ nchekwa ike atọ nke Furong, Langli na Yannong na nke mbụ, nke ga-abawanye ike nke ukwuu. ike grid iji nweta ume mmeghari ohuru, wusie ụkpụrụ grid ike ike, ma kwado mpaghara ahụ.
N'ime oge atụmatụ afọ ise nke iri na anọ, njikọ grid dị mma na oriri nke ume ọhụrụ ga-emepụta ọnọdụ dị mma maka mmepe siri ike nke ume ọhụrụ, ma ọ dị oke mkpa iji melite ọrụ nchekwa na kwụsiri ike nke grid ọkụ, ọkụ ọkụ. nkwa ọkwa nke Hunan Power Grid, na mmepe akụ na ụba nke mpaghara ọrụ.
Nke mbụ: HNAC nwere ọgụgụ isi ọrụ na mmezi azụmahịa ndetu ndetu: Beijiao Town Pumping Station Eletriki, ihe mkpali na ọrụ mmezi sistemu DC
Ọzọ: nde 181! HNAC meriri n'ịkwanye na ntinye nke igwe eletrọnịkị maka ọdụ ụgbọ mmiri Kandaji na Niger.